ရိုးရိုး ၅ ဆင့်အဆင့်အွန်လိုင်းအရောင်းဆိုင်ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်မလဲ Martech Zone
COVID-19 ကြောင့်လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်အတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်အွန်လိုင်းစျေးကွက်သို့ပြောင်းလဲလာကြသည်။ ဤသို့ဖြင့်များစွာသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ထိရောက်သောဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာများ၊ အထူးသဖြင့်သူတို့၏အုတ်များနှင့်မော်တာဆိုင်များမှတဆင့်ရောင်းအားအပေါ်အဓိကမှီခိုသောကုမ္ပဏီများနှင့်အတူပေါ်ပေါက်လာရန်ရှာဖွေနေကြသည်။
စားသောက်ဆိုင်များ၊ လက်လီအရောင်းဆိုင်များနှင့်များစွာသောအခြားသူများသည်ထပ်မံဖွင့်လှစ်ရန်စတင်နေစဉ်လွန်ခဲ့သောလများအတွင်းကရရှိခဲ့သောသင်ခန်းစာမှာရှင်းပါသည် - အွန်လိုင်းစျေးကွက်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟာဗျူဟာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရမည်။
အချို့သောသူများအတွက်မူအွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည်အသစ်သောအရာဖြစ်သောကြောင့်ခြိမ်းခြောက်နိုင်သည်။ လူတစ် ဦး မှဖော်ပြနိုင်သောမရေမတွက်နိုင်သောကိရိယာများ၊ လမ်းကြောင်းများနှင့်ပလက်ဖောင်းများစွာရှိသည်။
ခဲ - မီးစက်ကိုဖန်တီးပါ
ဤအဆင့်ငါးဆင့်သည်စာအုပ်တွင် Donald Miller နှင့် Dr.JJ Peterson ရေးသားသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမူဘောင်ဖြစ်သည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်ရိုးရှင်းသည်။ အတူတူသူတို့ကငါတို့ပုံမှန်အားဖြင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး / အရောင်းသတင်းဟုခေါ်တွင်သောအရာကိုဖွဲ့စည်းရန်။
အဆင့် 1: One-Liner
သင်၏ one-liner သည်ရိုးရှင်းသော 2-3 စာကြောင်းများဖြစ်ပြီးသင်ဖောက်သည်များကူညီပေးသည့်ပြproblemနာ၊ သင်၏ပြsolutionနာကိုဖြေရှင်းခြင်း (ဥပမာသင်၏ထုတ်ကုန် / ၀ န်ဆောင်မှု) နှင့်သင်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ပြီးနောက်ဖောက်သည်များမျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်များကိုဖော်ပြသည့်ရိုးရှင်းသော ၀ ါကျများဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ကြိုးတည်းဖြင့်စတင်ရခြင်းအကြောင်းအရင်းမှာ၎င်း၏ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်၏အီးမေးလ်လက်မှတ်၊ စီးပွားရေးကဒ်များ၊ တိုက်ရိုက်မေးလ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်သွယ်နိုင်သည်။ သင်၏အွန်လိုင်းစျေးကွက်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသာကန့်သတ်မထားပါ။
One-liner ၏ရည်ရွယ်ချက်သည်ရိုးရှင်းပါသည်။ သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုစိတ် ၀ င်စားသည်။ ၎င်းသည်ဖောက်သည်များအတွက်သင်ဖြေရှင်းသောပြwithနာနှင့်အစပြုသည်။ သင်သည်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အတွက်သင်၏အလားအလာရှိသောဖောက်သည်၏စိတ် ၀ င်စားမှုကိုပုံသွင်းနိုင်မှသာသူတို့သည်နောက်တစ်ဆင့်သို့သွားပါလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့တစ် ဦး တည်းသော -line ကိုဖန်တီးသည့်အခါဖောက်သည်ဗဟိုပြု!
လှုပ်ရှားမှုအဆင့် - သင်၏ဖောက်သည်ရင်ဆိုင်ရမည့်ပြ,နာ၊ သင်ကမ်းလှမ်းသောဖြေရှင်းချက်နှင့်သင်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ပြီးနောက်သင့်ဖောက်သည်မျှော်လင့်ထားသည့်ရလာဒ်များကိုဖော်ပြခြင်းဖြင့်သင်၏တစ်ကြောင်းတည်းကိုဖန်တီးပါ။
အဆင့် ၂။ သင်၏ဝဘ်ဆိုက်ကိုကြိုးကွင်းပြင်ထားပါ
သင်၏အရောင်းဌာန၏နောက်အဆင့်မှာအလုပ်လုပ်သောဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်ဖြစ်သည်။ ငါသိတဲ့အတိုင်းပဲစိုးရွံ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေတယ်ဆိုတာသိပေမယ့်မင်းရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်လိုအပ်ချက်ကိုအေဂျင်စီတစ်ခုဆီအမြဲတမ်းလွှဲပြောင်းပေးနိုင်တယ်။
သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်တတ်နိုင်သမျှရိုးရှင်းပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းသည်အရောင်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ များစွာသောစီးပွားရေးပိုင်ရှင်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုသင့်အတွက်ငွေပိုမိုထုတ်ပေးသင့်သည့်အချိန်တွင် static အဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ ၀ င်လေလေဆက်သွယ်မှုနည်းလေလေ၊ သင်၏ဖောက်သည်များရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသောပြyourနာများနှင့်သင်၏ဖြေရှင်းချက်အကြောင်းများလေလေ၊
ကျွန်ုပ်တို့ရောင်းဝယ်ခြင်းတွင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုပါ ၀ င်သောအကြောင်းရင်းမှာသင်၏အွန်လိုင်းနှင့်လူများစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရန်အဓိကနေရာဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်သည်သူတို့၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုသင်၏တစ် ဦး တည်းသောကြိုးဖြင့်ဆွဲယူလိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူတို့အားသတင်းအချက်အလက်အနည်းငယ် ပေး၍ ၎င်းတို့အားရောင်းချခြင်းဆီသို့ ဦး တည်သည့်ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းလှမ်းလိုသည်။
လှုပ်ရှားမှုအဆင့် - သင်၏ဝဘ်ဆိုက်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲနေစဉ်သင်သည်သင်၏ပထမဆုံးခေါ်ဆိုမှု -action (CTA) ကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များကသင်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ရန်ယင်းကိုလုပ်ဆောင်ရမည်။ ၎င်းသည်“ ၀ ယ်ခြင်း” သို့မဟုတ်“ ခန့်မှန်းရ” ကဲ့သို့သောပိုမိုရှုပ်ထွေးသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သင့်လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောမည်သည့်အရာမဆို။ သင်၏အဓိက CTA ကိုစဉ်းစားပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ဝက်ဘ်ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအနည်းငယ်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေလိမ့်မည်။
အဆင့် ၃။ Lead-Generator တစ်ခုကိုဖန်တီးပါ
ဤတွင်ဤနေရာတွင်ပိုမိုရိုးရာသဘောအရအရောင်းသတင်းကိုကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ခဲ - မီးစက်သည်ဝယ်ယူနိုင်သောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအလားအလာရှိသောဖောက်သည်များကသူတို့၏အီးမေးလ်လိပ်စာအတွက်လဲလှယ်နိုင်သည်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာဥပမာများစွာတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာငါသေချာပါတယ်။
ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်အီးမေးလ်လိပ်စာပေးလျှင်ရိုးရှင်းသော PDF သို့မဟုတ်တိုတောင်းသောဗီဒီယိုတိုများကိုပြုလုပ်လိုသည်။ ခဲ - မီးစက်အတွက်အချို့သောအကြံဥာဏ်များသည်စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူ၊ စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုအင်တာဗျူးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်နှင့်လုံးဝသက်ဆိုင်ပြီးသင်၏ထင်မြင်ချက်သည်သင့်ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်အတွက်တန်ဖိုးရှိလိမ့်မည်။
ခဲ - မီးစက်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအလားအလာရှိသောဖောက်သည်များ၏ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်ရရှိရန်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည်ထက် ပို၍၊ အကယ်၍ တစ်ယောက်ယောက်ကသင့် ဦး ဆောင်သည့်မီးစက်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲလျှင်သူတို့သည်နွေးထွေးသောအလားအလာရှိပြီးသင်၏ကုန်ပစ္စည်း / ဝန်ဆောင်မှုကိုစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့ခဲ - မီးစက်အတွက်အီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုဖလှယ်ခြင်းသည်အရောင်းအဝယ်ကိစ္စအတွက်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခုနှင့်ဝယ်ယူမှုတစ်ခုနှင့် ပို၍ နီးကပ်သည်။
လှုပ်ရှားမှုအဆင့် - ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်အတွက်အဖိုးတန်မည့်၊ သင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာပေးရန်သူတို့ကိုလှုံ့ဆော်ပေးမည့်အကြောင်းအရာအပိုင်းအစတစ်ခုကို Brainstorm ။ ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးစရာမလိုပါ၊ သို့သော်သင်ရောင်းရန်ကြိုးစားနေသူများနှင့်သက်ဆိုင်မှုရှိရန်လိုအပ်သည်။
အဆင့် 4: အရောင်းအီးမေးလ်အဆက်မပြတ်ဖန်တီးပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းအ ၀ ယ်၏အလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းသို့ယခုကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ သင်၏အရောင်းအီးမေးလ်သည်သင်၏ခဲ - မီးစက်ကိုဒေါင်းလုပ်ချသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်၏အလားအလာရှိသောဖောက်သည်ထံသို့ပို့ပေးသောအီးမေးလ် ၅-၇ ဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့ကိုရက်အနည်းငယ်ခြား။ သို့မဟုတ်သင့်လုပ်ငန်း၏သဘောသဘာဝအရရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ခြား။ ပေးပို့နိုင်သည်။
သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးအီးမေးလ်ကိုသင်ကတိပြုထားသော lead-generator နှင့်ပို့ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းကိုရိုးရှင်းအောင်ထားပါ။ ထို့နောက်သင့်စီစဉ်အတွင်းနောက်လာမည့်အီးမေးလ်အမြောက်အများကိုထောက်ခံစာများနှင့်ကုန်ပစ္စည်း / ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ ယ်ရန်ကန့်ကွက်မှုများကိုကျော်လွှားသင့်သည်။ အရောင်းအစဉ်လိုက်၏နောက်ဆုံးအီးမေးလ်သည်တိုက်ရိုက်ရောင်းသည့်အီးမေးလ်ဖြစ်သင့်သည်။ မရှက်ပါနဲ့ - တစ်ယောက်ယောက်ကမင်းရဲ့ lead-generator ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုက်ရင်မင်းမှာမင်းကိုလိုချင်တယ်။ သူတို့ကအနည်းငယ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုလိုအပ်ပါတယ်။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များအမှန်တကယ်ဖောက်သည်များဖြစ်လာသည်ကိုတွေ့မြင်လာရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အလိုအလျောက်အရောင်းအစဉ်လိုက်ရှိသည်ဟုအကြောင်းပြချက်မှာသင်၏အနာဂတ်အလားအလာသို့အမြဲတမ်းရောင်းရန်ကြိုးစားခြင်းသည်မီးမလောင်နိုင်သည့်အတွက်ဤအရာအားလုံးကို autopilot တွင်ထားနိုင်သည်။ သင်၏အရောင်းအစဉ်လိုက်၏ရည်မှန်းချက်မှာရှင်းလင်းချက်ဖြစ်သည်။
လှုပ်ရှားမှုအဆင့် - သင်၏အရောင်းအစီအစဉ်တွင်သင်လိုချင်သောအီးမေးလ် ၅-၇ ကိုစဉ်းစားပါ။ (ခဲ - မီးစက်၊ သက်သေခံချက်များ၊ ကန့်ကွက်ခြင်းများကိုကျော်လွှားပြီးတိုက်ရိုက်အရောင်းအီးမေးလ်အပါအ ၀ င်) ။ သူတို့ဟာရှည်လျားပြီးရှုပ်ထွေးနေစရာမလိုပါဘူး။ တကယ်တော့ပိုကောင်းလေပိုကောင်းတယ်။ သို့သော်ရွှေစည်းမျဉ်းသည်၎င်းတို့သည်သက်ဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ဝင်စားမှုရှိရန်ဖြစ်သည်။
အဆင့် ၅။ ပျိုးထောင်သောအီးမေးလ်အဆက်မပြတ်ဖန်တီးပါ
သင်၏ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသောအီးမေးလ်အဆက်အသွယ်သည်သင်၏အီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ်အပေါ်မည်မျှစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့် မူတည်၍ email ၆-၅၂ ခုမှဖြစ်သည်။ ဤအီးမေးလ်များကိုအပတ်စဉ်ပုံမှန်ပေးပို့လေ့ရှိပြီးသင်၏ရည်မှန်းသောပရိသတ်အတွက်တန်ဖိုးရှိလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်သောအကြံဥာဏ်များ၊ ကုမ္ပဏီ / စက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းများ၊ မည်သို့ဆောင်ရွက်သင့်သည်စသည်တို့မှဖြစ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပျိုးထောင်ပေးသည့်အကြောင်းအရင်းမှာသင်၏ခဲ - မီးစက်ကိုဒေါင်းလုဒ်ချပြီးနောက်နှင့်သင်၏အရောင်းအစီအစဉ်များကိုဖြတ်ကျော်ပြီးနောက်၌ပင်အချို့ဖောက်သည်များသည် ၀ ယ်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆင်ပြေပါတယ်။ သို့သော်ဤအလားအလာရှိသောဖောက်သည်များကိုကျွန်ုပ်တို့မဆုံးရှုံးချင်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏ထုတ်ကုန် / ၀ န်ဆောင်မှုသည်သူတို့၏ပြproblemနာအတွက်အဖြေဖြစ်ကြောင်းသတိပေးရန်အီးမေးလ်များကိုသင်အမြဲတမ်းပို့သည်။
လူတွေကမင်းရဲ့အီးမေးလ်ကိုတောင်မှမဖတ်ရင်တောင်မှအဆင်ပြေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်ဟာသူတို့ရဲ့အီးမေးလ်စာပုံးထဲမှာပေါ်နေတဲ့အတွက်ဒီအစီအစဉ်ဟာလက်ကိုင်ဖုန်းမှာမကြာခဏဖြစ်တတ်တယ်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကုမ္ပဏီတည်ရှိကြောင်း၊
အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များသည်ဤပြုစုပျိုးထောင်မှုအစီအစဉ်ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၎င်းတို့ကိုအခြားပြုစုပျိုးထောင်ရေးအစီအစဉ်တွင်နေရာ ချ၍ သို့မဟုတ်အခြားအရောင်းအစီအစဉ်သို့လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ သင်၏အလုပ်နှင့်စီးပွားရေးတွင်မည်သူ့ကိုမျှမဆုံးရှုံးကြောင်းသေချာစေရန်မှာထိပ်ဆုံးဖြစ်သည်။
လှုပ်ရှားမှုအဆင့် - သင်၏ပြုစုပျိုးထောင်သောအီးမေးလ်အစီအစဉ်၏အဓိကအကြောင်းအရာကိုဆုံးဖြတ်ပါ။ သင်သည်သင်၏စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သောအကြံပေးချက်များထွက်ပေးပို့လိမ့်မည်နည်း ဘယ်လိုလဲ ကုမ္ပဏီသတင်း သို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုခု။ သင်ဆုံးဖြတ်။
အဲဒီမှာသင်ကရှိသည်! သင်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်သင်၏အဖွဲ့နှင့်အတူအကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့်ရိုးရိုး ၅ ဆင့်ရောင်းအား
သင်ဤအရောင်းသတင်းမူဘောင်ကိုဖန်တီးသောကုမ္ပဏီအကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုလျှင်၊ ထွက်စစ်ဆေးပါ StoryBrand.com။ သူတို့မှာလည်းရှိတယ် တိုက်ရိုက်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ နှင့် ပုဂ္ဂလိကအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ သင်နှင့်သင်၏အဖွဲ့ကိုသူတို့၏ရိုးရှင်းသောမူဘောင်တွင်ပညာပေးရန်။
StoryBrand နိယာမများအတိုင်းသင်၏စီးပွားရေးအတွက်အရောင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာတစ်ခုရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သို့ဆက်သွယ်ပါ။ အေဂျင်စီ Boon.
Agency Boon ကိုဆက်သွယ်ပါ
Tags: အေဂျင်စီ BoonDonald Miller ကအီးမေးလ်အစီအစဉ်ဂျေပီတာဆန်ခဲမီးစက်ခဲ - မီးစက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်ရိုးရှင်းပါသည်အီးမေးလ် sequence ကိုပြုစုပျိုးထောင်တစ်ကြောင်းတည်းအရောင်းအီးမေးလ် sequence ကိုရောင်းအားကတော့ဇာတ်လမ်းwireframe
Ryan Crozier သည်တည်ထောင်သူဖြစ်သည် အေဂျင်စီ Boonဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီကလူတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ်။ သူသည် ၁၅ နှစ်ခွဲအတွေ့အကြုံရှိပြီးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာကို StoryBrand မူဘောင်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကူညီခဲ့သည်။
Mobile-first Post-Cookie ကမ္ဘာတွင် Digital Reach ကိုတိုးချဲ့ခြင်း